Sosialy Archives - Page 75 sur 150 -
Ady amin’ny kere- Atsimo Andrefana : Nomena masomboly ireo tantsaha
14/12/2017 admintriatra 0
Isan’ny olana sedrain’ireo mponina any amin’ny faritra Atsimo Andrefana ny olana ara-tsakafo, indrindra rehefa fotoanan’ ny main-tany. Ny tena olana, araka ny fanazavana ny tahiry eo amin’ny masomboly no tsy ampy. Ho fanohanana ireo vondron’ny …Tohiny
Vatsin’Ankohonana-Ambohimasoa : Ankizy 6 618 tafaverina an-tsekoly
Ankizy maro no tafaverina an-tsekoly hatramin’ny nisian’ny vatsin’ankohonana, tany amin’ny distrikan’Ambohimasoa. Araka ny tatitra voaray, dia mahatratra 6 618 avy amin’ny kaominina 9 amin’ireo kaominina 18 any amin’ny distrikan’Ambohimasoa mitsinjara amin’ny fokontany 66 ankehitriny no …Tohiny
Asa sosialin’ny vadin’ny Filoha : Zaza maherin’ny roanjato nahazo fanampiana
12/12/2017 admintriatra 0
Nifarana teny amin’ny hopitalin-jazakely Ambohimiandra sy Tsaralalàna ary ny foibe fitaizana zaza kamboty teny Ambanidia ny asa sosialin’ny vadin’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Voahangy, omaly. Ankizy kely miisa 240 sy ny ray aman-dreniny avy amin’ireo toerana telo …Tohiny
Fiatrehana ny fety : Olona 383 nahazo fanampiana avy tamin’ny Consulat n’i Vietnam
11/12/2017 admintriatra 0
Ho fanampiana ny mpiara-belona dia mahatsiaro ireo mponina manodidina ny biraony ny “Consul honoraire” du Vietnam. Toa ny efa fanaony isan-taona hatramin’ny nijoroany ny taona 2015, dia miezaka hatrany manome tanana ny vahoaka malagasy ity …Tohiny
Taorian’i Fianarantsoa sy Toliara, dia Mahajanga indray no nanatanteraka ny zaikabe fahatelon’ny Antoko HVM. Fotoana iray izay nahafahan’ireo mpikambana eo anivon’ny birao nasionaly indray ny tahaka izao, mba nifanakalozana amin’ ireo mpikambana eny ifotony, amin’ny ...Tohiny